Nakhu abantu abashoyo mayelana ne-Best Manail Manail
Inzuzo enkulu yokuqala ye-UV yelapha ukuncishiswa kokutshala imali okuqala okudingekayo ohlelweni lwelapha lwe-UV, olubiza amaphuzu angamaphesenti angama-80 ngaphansi kokomisa komoya oshisayo. Ezinye izinzuzo ezinkulu zikhuphuka umkhiqizo, ikhwalithi yomkhiqizo kanye nokwehluka komkhiqizo. -Akusho ukuqedwa kokuqothulwa kwezinto eziyingozi ezinobungozi obujwayelekile (ama-Vocs)
Iqiniso le ndaba ukuthi lapho ubheka ukumaketha inkampani yakho, kufanele uhlakaniphe ekukhetheni kwakho. I-logo okhetha ukuyisebenzisa ehhovisi lakho ayidingi ukukhombisa inkampani yakho kuphela, kepha futhi ukuheha amakhasimende angaba khona. Ukuthi kungani kufanele uthole ama-logo we-LED okuyisixazululo esifanelekile sokusebenzisa ngaphandle kwesitolo sakho, kodwa futhi nesixazululo esifanelekile sokusebenzisa ngaphakathi.